ဘာကြောင့်ပြောင်းလဲရတာအရမ်းခက်တာလဲ - Porn တွင်သင်၏ ဦး နှောက်
ရေဗက္ကာ Skloot (2007) က
Nora Volkow ငါ၏အချောကလက်လိုသည်။ ကျွန်မသူမဒါရိုက်တာရဲ့ဘယ်မှာမူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုအပေါ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အင်စတီကျုမှာသူမ၏ကြီးမားသော-windowed ရုံးအတွက်တစ်ပတ်ပတ်လည်ကွန်ဖရစားပွဲ၌ထိုင်လျက်ပေါ့။ Volkow အစားအစာများကဲ့သို့ဖြတ်, အခြို့လူမြားအဘို့, သူမ၏စား၏အာရုံကြောသို့သုတေသနနှင့်ဘယ်လိုအကြောင်းငါ့ကိုပြောပြနေသည်ဆို, ချောကလက်-နိုင်ပါတယ်အဖြစ်ခက်ခဲဘိန်းဖြူတစ် junkie အဘို့ဖြစ်၏ကန်ကဲ့သို့ပြုကြလော့။ အစားအစာ, သူမကပြောပါတယ်ခက်ခဲမူးယစ်ဆေးဝါးများအားဖြင့်ဦးနှောက်အတွင်းဖြစ်ပေါ်အတိအကျဓာတုတုံ့ပြန်မှုထွက်လာပါတယ်အားဖြင့်လူတွေကို hooks ။ ဒါမှမဟုတ်နီကိုတင်း။ သို့မဟုတ်အရက်။ သို့မဟုတ်စျေးဝယ်။ သို့မဟုတ်လိင်။ "ငါသည်သင်တို့၏ချောကလက်မှာရှာဖွေနေရပ်တန့်မရဘူး" ဟု Volkow သူမ၏မျက်စိချောကလက်ပြန်ငါမှပျံတတ်သောမီးကဆိုပါတယ်။ ဒါဟာ Hershey ရဲ့အနမ်း Volkow ရဲ့အတွင်းရေးမှူးအစောပိုင်းကငါ့ကိုအချိန်လေးပေးခဲ့တယ်ပါပဲ။ ကျွန်မအပြုံးနှင့်ကျေးဇူး-သင်နှင့်အတူ ယူ. , ဒါပေမယ့်ငါသည်ဤလောက၏အတွက်အနည်းငယ်အမြိုးသမီးမြား၏တဦးတည်းပေါ့
အဘယ်သူသည်အမှန်တကယ်ချောကလက်မကြိုက်ကြပါဘူး။ ဒါနဲ့နောက်ကျောက၎င်း၏သတ္တု wrapper အတွက်ကြွင်းသောအရာ ထား. , ယဉ်ကျေးဖြစ်ဖို့အစွန်အဖျားကိုချွတ် bit နှင့်နောက်လာမည့်ငါ၏အမှတ်စုစာအုပ်မှစားပွဲပေါ်သို့ကြောင့်ကျဆင်းခဲ့သည်။ ဤသူသည်ငါမျှော်လင့်ထားသောအရာကိုမရသောအရာ, Volkow မသက်မသာစေသည်။
Volkow အကြောင်းကိုအများစုမှာဆောင်းပါးများကိုမက္ကစီကိုစီးတီးရှိသူမ၏ငယ်စဉ်ကလေးဘဝအာရုံစိုက်ပါ။ သူတို့ကသူမစတာလင်သူမ၏အကြီးအ-အဘိုး-Leon Trotsky, ပြည်ပအခြေစိုက်ရုရှားတော်လှန်ရေးသမား-အသတ်ခံရကာရေခဲပုဆိန်နှင့်အတူရှိခဲ့ဘယ်မှာတူညီတဲ့အိမ်တော်၌ကြီးပြင်းအံ့သြဖွယ်ဖြစ်သည်မဟုတ်, လော သူတို့ဟာထို့နောက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသို့ သွား. နိုင်ငံ၏ဦးဆောင်သုတေသနပြုစိတ်ရောဂါကုဆရာဝန်တစ်ဦးဖြစ်လာခဲ့သည်, Volkow 18 မှာဆေးဘက်ဆိုင်ရာကျောင်းတွင်စတင်ဘယ်လိုအကြောင်းပြောဆို။ အကြှနျုပျမူကားရန်, Volkow အကြောင်းကိုအများဆုံးစိတ်ဝင်စားဖွယ်အရာကိုသူမက-The နိုင်ငံ၏အမျိုးသားရေးမူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှု၏ဦးခေါင်းကိုပဲချောကလက် junkie မဟုတ်အေဂျင်စီ-သောအချက်ဖြစ်ပါသည်။ သူမသည်လည်းချောကလက် pusher ပါပဲ။ Volkow သူမ၏ Bethesda, Maryland ကပြန်နှင့်ထွက် paces, ရုံး-frizzy ဆံပင်တုံ, အနက်ရောင်ဒူးမြင့်ဖိနပ် clacking-ထို့နောက်ရပ်, သူမ၏မျက်စိများနှင့်သှားပွီး။ ပွုံးကျဉ်းမြောင်း။ "ငါသည်အချို့သောကောင်းသောပစ္စည်းပစ္စယရှိသည်," ဟုသူမကသူမ၏စားပွဲအံဆွဲသို့ရောက်ရှိ, ကပြောပါတယ်။ "ခုနစ်ဆယ့်ခုနစ်ရာခိုင်နှုန်းသန့်စင်သောကိုကိုး။ " သူမဟာလာမယ့်ငါ့ကိုရန်စားပွဲပေါ်လေးပုံတစ်ပုံစား bar ကိုလှဲ။ , သူမကပြောပါတယ်, "ရှေ့ဆက် Go" "အချို့ရှိသည်။ " ငါသည်အဘယ်သူမျှမကကျေးဇူးတင်စကားသူမ၏ပြောပြနှင့်သူမ၏မျက်ခုံးထစေ၏။
"ငါသည်လူတို့နှင့်အတူစမ်းသပ်ချက်ပြုပါ" ဟုသူမကပြောပါတယ်။ "ငါသည်ထိုအရပ်၌ချောကလက်ထားအဲဒါကိုကောက်ဖို့သူတို့ကိုကြာအဘယ်မျှကာလပတ်လုံးကြည့်ပါ။ " သူမဟာသူမရဲ့ဦးခေါင်းချောက်ချားတော်မူ၏။ "ငါသည်ချောကလက်နှင့်အတူအလွန်ဆိုးမိပါတယ်။ ကျွန်မချက်ချင်းယူပါ။ ငါသည်ငါ့ကိုယ်ပိုင်စာမေးပွဲကိုကျရှုံးသွားခဲ့တာပါ။ သူမကိုကမ်းလှမ်း cheesecake သို့မဟုတ်ဆှီဒငျငါးလိုပါကကျွန်မငါးစက္ကန့်ကြာမြင့်ခဲ့ကြမှာမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သင်တို့မူကား "ဟုသူမကအကြှနျုပျ၏အနမ်းမှာညွှန်ပြ, ကပြောပါတယ်," သင်အလွန်ကောင်းသော inhibitory ထိန်းချုပ်မှုရှိသည်! "ဒီ, ငါ့ကိုရယ်မောစေသည်။ ဒါပေမယ့်ငါ့အပြဿနာအစားအစာမျှမက, ဒါကြောင့်လေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်ငါကလုပ်နေတာ၏နိုငျပုံရသည်ဆိုတဲ့အချက်ကိုပါပဲ။ အဘယ်သူမျှမကိစ္စကျွန်မအားကစားရုံ join သို့မဟုတ်အသစ်ယလေ့ကျင့်ခန်းအဝတ်ကိုဝယ်သို့မဟုတ်သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူလေ့ကျင့်ခန်းရက်စွဲများအောင်ဘယ်လိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာငါရိုးရှင်းစွာလေ့ကျင့်ခန်းပါဘူး။ အစဉ်မပြတ်ငါကောင်းသောအကြောင်းပြချက်ရရှိပါသည်: ငါမအားကစားရုံငါ၏အရပ်ကွက်အတွင်းရှိမယ့်, ငါပိုကောင်းတဲ့ဖိနပ်လိုအပ်ပါတယ်, ဒါကြောင့်မိုးရွာမယ့်သိပ်အလုပ်များတယ်။ ငါနောက်ဆုံးနေ့တစ်ဦးခေါင်းကိုက်ခြင်း, သို့မဟုတ်ကြွက်တက်ရှိသည် ဖြစ်. , ဒါကြောင့်လည်းပူပြင်းသို့မဟုတ်လွန်းချမ်းအေးရဲ့ပြေးအကြှနျုပျ၏ခွကေိုနှိပ်စက်တာ, အလေးမိုးသည်းထန်စွာရှိပါတယ် ... ကိုယ့်အပေါ်ကိုသွားနိုင်ပါတယ်။ ငါနီးပါးတိုင်းလူ့ရောဂါကာကွယ်ပေးသည်ဟုဆောင်းပါးတွေကိုဖတ်ပါတယ်စိတ်ကျရောဂါတိုက်သဖြင့်, ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်ခိုင်မာစေ: ငါ့ဦးနှောက်၏ဆင်ခြင်တုံတရားအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုငါကငျြ့သုံးသငျ့တယျသိတယျ။ ငါကသငျသညျအာရုံစူးစိုက်ခြင်းနှင့်အိပ်ပျော်ခြင်းနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်လိင်ဆက်ဆံအထောက်အကူပြုစိတ်ဖိစီးမှုနှင့်စိုးရိမ်သောက, လျော့နည်းစေသည်နားထောင်ကြလော့။ ငါသည်ခပ်သိမ်းသောကြောင်းသူမလိုသလား? သို့သော်ပုံ, ငါ့ဦးနှောက်-ထားတဲ့အရာအားလုံးကအတိအကျအဖြစ်ဆက်ရှိနေဖို့ကြီးစိုး-လိုလားအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ဖြစ်ပျက်၏အခြားအစိတ်အပိုင်း။
နှင့်ရှင်းရှင်းလင်းလင်း, ငါတယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီနရောမှာကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု-နှလုံးရောဂါ, ဆီးချိုရောဂါများနှင့်အများအပြားအတွက်သေမင်း၏ဦးဆောင်အကြောင်းတရားများအပြုအမူပြောင်းလဲမှုကတဆင့်ကာကွယ်နိုင်သောဖြစ်ကင်ဆာ-နိုငျသောဘုံအသိပညာပါပဲ။ လူတွေထောင်ပေါင်းများစွာ၏ရာပေါင်းများစွာ, တစ်ဦးချင်းစီဇန်နဝါရီလ 1st နိုးထပါဟု "ယနေ့စတင်ခြင်း, ငါသည်အစားအသောက်များတွင် / လေ့ကျင့်ခန်းသွားတယ် / / လောင်းကစားဝိုင်းမူးယစ်ဆေးဝါးများကိုယူပြီး / ဆေးလိပ်ဖြတ် / ဘာပဲ။ " သူတို့ကမကြာခဏအလွန်ခဲယဉ်း, ကြိုးစားကြည့်ပေမယ့်အများဆုံးပျက်ကွက်ခဲ့ကြသည်။ ငါဘာကြောင့်လဲသိချင်ပါတယ်။ ထိုအခါငါသိပ်အလုပ်နှင့်မလုံလောက်သောအချိန်ကဲ့သို့အပြင်ပအကြောင်းအချက်များ, အကြောင်းပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ ကျနော်တို့ကိုပြောင်းလဲရန်ကြိုးစားသောအခါငါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးနှောက်ထဲမှာဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတာကိုရှာနေတာပါ, ငါတို့သည်အဘယ်သို့အမှန်တကယ်အောင်မြင်ကြောင်းအသိပညာကိုသုံးနိုင်သည်။
ဤသည်ကျွန်ုပ်၏ချောကလက်နှင့် ပတ်သက်. သူမ၏ obsessive နားထောင်ပြီး Nora Volkow ၏ရုံးခန်းဖွင့်အဆုံးသတ်ပုံဖြစ်ပါသည်။ dopamine, ဆဲလ်မှဆဲလ်ကနေအချက်ပြထုတ်လွှတ်ကျွန်တော်တို့ကိုရရှိသွားတဲ့သောဦးနှောက်ထဲမှာဓါတုဗေဒ: Volkow နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များကဒါ freakin '' ခက်တဲ့အလေ့အထကိုပြောင်းလဲစေသည်တစ်ချက်လေ့လာခွငျးအားဖွငျ့မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုနှင့်အဝလွန်ခြင်းအကြား link ကိုသုတေသနပြုအတိတ် 15 နှစ်ပေါင်းကုန်ရပြီ အစားအသောက်ထဲကနေစီးကရက်မှလိင်မှစျေးဝယ်ဖို့အရာအားလုံးအပေါ်ချိတ်ဆက်။
Dopamine ထို့နောက်မသက်ဆိုင်သင်တို့အဘို့ကောင်းပါတယ်အရာကိုပြုလုပ်ရရန်သင့်အားမောင်းနှင်ကိုသင်လိုချင်တဲ့အရာသင့်ဦးနှောက်သင်ပေးတယ်။ ဒါဟာနှစ်ခုခြေလှမ်းများ၌ဤပါဘူး။ ပထမဦးစွာသင်တစ်ဦး dopamine မြင့်တက်ခြင်းများဖြစ်ပေါ်ရသောသငျသညျအပျြောအပါး (ဆိုမက်ဒေါ်နယ်ရဲ့ပြင်သစ် fries) ပေးသည်ကြောင်းအရာတစ်ခုခု, ခံစားရသည်။ ကြောင်း dopamine အချို့သည်အမှတ်တရများကိုဖွဲ့စည်းထားရာကသင့်ဦးနှောက်၏ဧရိယာမှသွားရောက်ကာနှင့်ဆုလာဘ်ရတဲ့ရှိသူများ fries ချိတ်ဆက်ကာမှတ်ဉာဏ်ဖန်တီးပေးပါတယ်။ ထိုအခြိနျတှငျ, သိပ္ပံ-ပွောထဲမှာ, fries "။ အဓိက" ဖြစ်လာကြပါပြီတဖန်သင်တို့အဓိကရဲ့တစ်ခုခုထိတွေ့နေတဲ့အခါ, သင်ထင်စေခြင်းငှါ, ဒါကငါ့အဘို့ဆိုးရွားမယ့်, ငါမသင့်, ဒါပေမယ့်သင့်ရဲ့ဦးနှောက်မှတ်ပုံတင်, Dopamine ထီပေါက်! ဘယ်ခြေလှမ်းနှစ်ခုအတွက်လာဘယ်မှာဖြစ်ပါသည်: အမှတ်တရများအတွက်ထိပ်တွင်, dopamine အလိုဆန္ဒ, ဆုံးဖြတ်ချက်ချနှင့်လှုံ့ဆော်မှုများအတွက်တာဝန်ရှိသည့်ဦးနှောက်၏ဒေသများထိန်းချုပ်သည်။ fries အဓိကဖြစ်လာတစ်ချိန်ကဒီတော့သူတို့ကိုသင်ကြည့်ရှုသို့မဟုတ်အနံ့လာမည့်အချိန်, သင့်ဦးနှောက်အချို့ကိုသင်ရဖို့မောင်းကြောင်း dopamine တစ်ဦးမြင့်တက်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ သင်အောင်မြင်သည့်အခါ, သင့်ဦးနှောက်ကသင့်ဦးနှောက်သို့ထပ်မံပြုလုပ် etching, ပထမဦးဆုံးဌာန၌ fries အဓိကလုပ်ကြောင်းမှတ်ဉာဏ်အားပေးသောပိုပြီး dopamine, ထုတ်လုပ်ပေးသည်။ ဒါဟာ-အဆုံးသတ်ဘယ်တော့မှသံသရာရဲ့: အဆိုပါပိုပြီးသင်အကြိုးရဲ့တစ်ခုခုလုပ်, ပို dopamine သင်သည်နောက်တဖန်ထိုသို့ပြုသေချာစေသည်။ ဒီအလေ့အကငျြ့ကိုဖွဲ့စည်းပုံကိုအတိအကျဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ fries အလုံအလောက်အဓိကဖြစ်လာလျှင်နောက်ဆုံးတွင်, သင်၏ဦးနှောက်ကိုသင်ဘယ်နေရာမှာမက်ဒေါ်နယ်ရဲ့အနီးနေလျှင်ပင်, dopamine လွှတ်ပေးရန်နှင့် fries သင်အရောင်များကိုအဝါရောင်နဲ့အနီရောင်ကိုတွေ့မြင်အချိန်မရွေးရရန်သင့်အားတွန်းပါလိမ့်မယ်။
နှင့်ဤအကျိုးကိုမှုကြောင့်မည်သည့်အပြုအမူများအတွက်မှန်: orgasm အကြောင်းမရှိ dopamine surges ။ ဒါကြောင့်သင်ကအလောင်းအစားသောအခါ, ထီပေါက်နှိပ်တဲ့ပြိုင်ပွဲအနိုင်ရတစ်ဦးစမ်းသပ် acing, ကိုကင်းသို့မဟုတ်စိတ်ကြွဆေး, ဆေးလိပ်သောက်, အရက်သောက်လုပ်နေတာပါဘူး။ "Dopamine လှုံ့ဆျောမှုပါပဲ" ဟု Volkow ငါ့ကိုပြောပြတယ်။ သငျသညျ dopamine ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးသော Lab ထဲမှာတိရိစ္ဆာန်များဖန်တီးခဲ့လျှင် "သူတို့အဘယ်သူမျှမ drive ကိုရှိသည်။ သူတို့ကအစာကိုစားနိုင်ပါတယ်ကြောင့်ကောင်းသောအရသာ, ဒါပေမဲ့သူတို့မစားဘဲနေပါလိမ့်မယ်, သူတို့ကသေဆုံးပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့် "ဟုသူမကရုတ်တရက်သည်အထိသူမ၏ကွန်ပျူတာ ding, ငါသည်အညိတ်နှင့်ယူမှတ်စုပြောနေတာရဲ့အမျှသူတို့က, အမှန်တကယ်ဘာမှလုပ်ဖို့အဘယ်သူမျှမလှုံ့ဆျောမှုရှိသည်။ : သူမသည် e-mail ကိုရထားပြီးပြီဖြစ်ပါတယ်။ ငါကအစားအသောက်မှကြွလာသောအခါ compulsive မဟုတ်ပေမယ့် e-mail,? မေ့လိုက်ပါ။ Volkow ငါ၏အစွဲများကိုမျှဝေမပေးပါဘူး။ သူမသည် dopamine အကြောင်းပြောနေတာစောင့်ရှောက်, ငါပြန် ding ရှိရဲ့နောက်ကျောမှတ်စုတာကိုသွား, ငါ, သူမဟာသစ်နှစ်မျိုးကို e-mail ရှိပါတယ်ထင်ပါတယ်။ Volkow unfazed ဖြစ်ပါတယ်။ သူမကတစ်ဆယ်မက်ဆေ့ခ်ျများရှိရမည်နဲ့ကျွန်မအနိုင်နိုင်တက်လာပြီခုခံတွန်းလှန်သူတို့ကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖတ်နေနိုင်သည်အထိကျနော်တို့ဤကဲ့သို့သောအပေါ်သွားပါ။ ထိုအခါကငါ့ကို Hits: E-mail ကိုချောကလက် Volkow အဘို့ဖြစ်၏သကဲ့သို့ငါ့ကိုအဖြစ်အဓိကဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်မမကြာခဏပုံနှိပ်၌ငါ့အလုပ်ကိုမြင်နေမတိုင်မီလ, တခါတရံတွင်နှစ်ပေါင်းအလုပ်မလုပ်ပေမယ့် e- mail ကိုငါ့ကိုချက်ချင်းဆန္ဒပြည့်၏အကျိုးကိုပေးသည်။ ငါသည်ဤ Volkow ပြောပြခြင်းနှင့်သူမရယ်တတ်၏။ "သင်ညာဘက်င်" ဟုသူမကပြောပါတယ်။ "ငါတစ်ခု MRI စက်၌သင်တို့ကိုထားနှင့် e-mail, ဆူညံသံကစားလျှင်, သင်တူညီတဲ့ dopamine ရင့်အလောင်းအစားသူတို့တစ်စုံတစ်ဦးမွငျ့မားလာပြီဖြစ်ပါတယ်ထင်သောအခါငါကိုကင်းစွဲများတွင်တွေ့မြင် surges ။ "
ဒါကြောင့်ပြောင်းလဲပစ်ရန်ဒါခက်ခဲမယ့်အဘယ်ကြောင့်ဒီအဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လုပ်နေတာကဦးနှောက်ထဲမှာအခြေခံအကျဆုံးဦးနှောက်အာရုံကြောစနစ်တဦးတည်းတိုက်ပွဲကိုဆိုလိုသည်။ "သူကစဉ်းစားကြည့်ပါ," Volkow ကပြောပါတယ်။ "သင်တစ်ဦးမျိုးစိတ်ဒီဇိုင်းနေနှင့်သင်ကရှင်သန်ရပ်တည်ရေးကဲ့သို့စားဘို့အလွန်အရေးပါနှင့်မျိုးပွား-သငျသညျသူတို့အမှုအရာကိုပြန်လုပ်ချင်ဒါကြောင့်အားလုံးပျော်မွေ့အကြောင်းကိုဖွင့်မယ့်စနစ်ကဖန်တီးသောအရာတို့ကိုမသေချာအောင်လိုလျှင်။ ထိုအခါသင်သည် dopamine ရှိသူတို့အားအပြုအမူတွေကိုအလိုအလျောက်ဖြစ်လာပါစေ။ ဒါဟာတကယ်တောက်ပပါပဲ။ "
သူမသေးပါကသက်သေပြမထားပါဘူးသော်လည်း, Volkow အစားအစာမကြာခဏပျက်ကွက်အဘယ်ကြောင့်အကြောင်းသီအိုရီရှိပါတယ်: တိရိစ္ဆာန်လေ့လာမှုများအပေါ် အခြေခံ. သူမကသူတို့ဦးနှောက်အပေါ်မှီခိုဖြစ်လာကြပါပြီအချို့သောအစားအစာများကိုကန်ရန်ကြိုးစားသောအခါလူတွေဆုတ်ခွာတွေ့ကြုံခံစားစေခြင်းငှါထင်၏။ "လူတွေကိုစိတ်ဓာတ်ကျသို့မဟုတ်နှေးကွေးသို့မဟုတ်ယေဘုယျအားဖြင့်စက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်သောခံစားရပေမည်ဖြစ်သောကြောင့်။ " "ဒါဟာခက်ခဲရှိသူများအစားအစာများကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်စေသည်" ဟုသူမကအကြှနျုပျကိုပြောထားသည်ဒီဖြစ်ရပ်ဖြစ်ထွက်လှည့်မှန်လျှင်, သူမဖြစ်ကောင်းကူညီပေးပါမည်ကိုပိုမိုနှေးကွေးစွာသင့်ရဲ့အစားအသောက်ပြောင်းလဲနေတဲ့ကပြောပါတယ်။
သင်ဘယ်လိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုမူလကပင်ပျြောမှေ့စဖို့သငျသညျကဲ့သို့သုပ်နှင့်ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်းပေါ်လူနေမှု, ဒါမှမဟုတ်, ငါ၏အမှု၌, လေ့ကျင့်ခန်းမယ့်အရာတစ်ခုခုပေါ်တွင်ချိတ်ဆက်ရကြဘူး: ဒါပေမယ့် Volkow ဘို့အကြှနျုပျ၏အကြီးတွေဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုဒီပါသလဲ လူအတော်များများထွက်အလုပ်လုပ်နေတဲ့သဘာဝအမွငျ့မားရ။ ငါသို့သော်သူတို့ထဲကတဦးတည်းမဟုတ်ဖြစ်၏။ "အဲဒီမှာ dopamine system ကိုလှည့်စားရန်အချို့သောလမ်းသည်မဟုတ်လော" ကျွန်မသူမကိုမေးကြည့်ပါ။ "? တဏှာစစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းသို့အကြှနျုပျ၏ဦးနှောက်အရူးမှတချို့ကလမ်း" သေချာတာပေါ့, သူမ says: လျှို့ဝှက်ချက်ဆုလာဘ်တက်စဉ်းစားနေသည်။ အထဲကအလုပ်လုပ်ဘို့အကြှနျုပျ၏အနိုင်ငွေပမာဏခြေသည်းသို့မဟုတ်ဖိနပ်အသစ်တစ်စုံဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အစားအသောက်များတွင်ဖို့ကြိုးစားနေတစ်စုံတစ်ဦးအတွက်: ဒီတစ်ခါလည်းသင်သည်ကောင်းသောအစာစား၏တစ်ပါတ်ပြီးနောက်အနှိပ်ခံရခြင်းသို့မဟုတ်မိတ်ဆွေတစ်ဦးရှိသငျသညျလမ်းကြောင်းအပေါ်ဆက်နေလျှင် (သင်ပေးဆောင်, ဒါပေမယ့်သူမဟာဘောက်ချာကိုထိန်းချုပ်ထား) ဆုကြေးဇူးကိုအသိမှတ်ပြုလက်မှတ်များထုတ်မြည်။ "သင့်ဦးနှောက်ကိုသင်အလေ့အထဖွဲ့စည်းရန်ကူညီပေးပါမည်ဖြစ်သောကြောင့်အတူအပြုသဘောရလဒ်ကိုပေါင်းသင်းပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်တစ်ဦးအမူအကျင့်များအတွက်ဆုလာဘ်ပေးခြင်းဟာ dopamine သည့်စနစ်ပါဝင်နေသည်။ "
ကျွန်မအိမ်ပြန်ရတဲ့အခါ, ကိုယ်ကကြိုးစား။ ငါသည်ကိုယ်အလိုအလျောက်အတူစာချုပ်ပါစေ: ငါတစ်ပါတ်မှုအတွက်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းလေ့ကျင့်ခန်းလျှင်, ငါသစ်တစ်ခု mini ကို MP3 ကစားသမားရယူပါ။ ငါသည်နံနက်အချိန်၌နိုးကမိုးရွာနေသည်။ ငါ MP3 ကစားသမားတွေအကြောင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်သတိပေးပါ။ အဘယ်အရာကိုတစ်ဦးမှထွက်ရှာဖွေအတော်ကြာရှုပ်ထွေးမိနစ်ပြီးနောက်
လူတစ်ဦးသည်မိုဃ်းရေအတွက်ကိုလေ့ကျင့်ပေးဖို့ကျီ (က poncho? ထီး?), ငါရေစိုခံတောင်တက်ဖိနပ်နှင့်သုံးကြိမ်ငါ့အရဲ့အရွယ်အစားသောငါ၏ရည်းစားရဲ့ hood ကိုချွေးထွက်အတွက်တက်အဆုံးသတ်။ ငါ leash ခွေးနှင့်ကျွန်တော်အပြေး start သော်လည်းငါ့ဖိနပ်လည်းမိုးသည်းထန်စွာဖြစ်ကြောင်းနှင့်ငါ့အဆုတ်ကိုမီးမရှို့, ပေါင်းပါးပျဉ်းကြှနျုပျမကျြစိကိုကျော်ကျဆင်းစောင့်ရှောက်သောကြောင့်, ငါကိုမမွငျနိုငျသညျ။ နှင့်သင်တန်း၏, မိုးရွာရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တစ်ဦးမြန်နှုန်းလမ်းလျှောက်ဖို့ drop ။ တစ်နာရီအကြာမှာကျွန်တော်အိမ်မှာကျွန်တော်တစ်ဦးမြစ်အတွက် dunked ခဲ့တာနဲ့တူရှာဖွေနေရ။ ငါသည်ငါ့စိုစွတ်သောအဝတ်ကိုချွတ်ချွတ်နဲ့ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပြောပြ, ထိုခြောက်ဦးထက်ပိုသောကြိမ်လုပ်ပါနဲ့သင်တစ်ဦး MP3 ကစားသမားရယူပါ။ ထိုအခါငါထင်, ဟုတ်, ညာ, သငျသညျဖြစ်နိုင်သည်ဂီတမပါဘဲနောက်တဖန်ကငျြ့သုံးနိုငျပါဘူး။ ဒါနဲ့တစ်ခု MP3 ကစားသမားကိုဝယ်ယူရန်နှင့်ငါတကယ်တဖန်ငါအပြေးတူတစ်ခုခုကြိုးစားကြည့်မတိုင်မီအဝတ်ကိုလေ့ကျင့်ထားဖို့လိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြောပြပါ။
နက်ဖြန်နေ့၌ငါ Baltimore အတွက်ကနေဒီ Krieger Institute မှ, ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာမသန်စွမ်းကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များအတွက်ကျော်ကြားတဲ့စင်တာမှာအလွန်အစိမ်းရောင်နဲ့အပြာရောင်ကော်ဖီဆိုင်ထဲမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုရှာပါ။ ငါမိုက်ကယ် Schlund, Ph.D သူသင်ယူမှုနှင့်အပြုအမူပြောင်းလဲမှုတွင်ပါဝင်ပတ်သက်သည်ဦးနှောက်၏ဒေသများစူးစမ်းဘယ်မှာအများအပြားသိပ္ပံနည်းကျအဖွဲ့အစည်းများအကြားသူ့အချိန်အပိုင်းသုံးပိုင်းသူတစ်ဦးသုတေသနစိတ်ပညာရှင်ကနေဖြတ်ပြီးထိုင်လျက်ပေါ့။ Schlund အဘို့, ဒီအလုပ်အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာကိုသင်ယူနှင့်အတူလူကူညီပေးနေရည်ရွယ်ပိုကြီးတဲ့စီမံကိန်း၏အစိတ်အပိုင်းတခုဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်လည်းအဘယ်သို့ငါစိတ်ဝင်စားတာကိုသူကမကြာသေးခင်ကသူသူတို့ဆုလာဘ်အပေါ်အခြေခံပြီးအသစ်သောအပြုအမူတွေကိုလေ့လာသင်ယူအဖြစ်ကျန်းမာအရွယ်ရောက်ပြီးဦးနှောက်စောင့်ကြည့်လလောက်ရှိရာမြောက်တက္ကဆက်တက္ကသိုလ်မှာကိုလက်စသတ်လေ့လာမှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ဤတွင်ဖြစ်ပျက်င်: တစ်ခု MRI စက်ထဲသို့စေတနာ့ဝန်ထမ်းလျှောပြီးနောက်သူကသူတို့ကိုနှစ်ခုခလုတ်-One လက်ျာဘက်အဘို့ကိုပေး၏, လက်ဝဲ-ထို့နောက်အဘို့တယောက်သင်ဟာတချို့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေလုပ်ရပါလိမ့်မယ် "ဟုပြောသည်။ သငျသညျမှန်ကန်သောနေလျှင်, သင်ငွေရှာ။ သငျသညျကမှားနေပါက, ငွေမရှိသော။ "သူကသူတို့ရဲ့ဦးနှောက်စကင်ဖတ်ဖို့စတင်ခဲ့ပြီးအဖြစ် rattled နှင့် clanged သောစက်, ထပစ်ခတ်ကြသည်။ စက်အတွင်းပိုင်း, ထိုစေတနာ့ဝန်ထမ်း '' ဦးခေါင်းအထက်တွင်ကွန်ပျူတာ screen ပေါ်မှာတစ်စက်ဝိုင်းထင်ရှားပျောက်ကွယ်သွားခဲ့သည်။ ထို့နောက်စကားလုံးသူတို့ပိုင်ခွင့်သို့မဟုတ်ကျန်ရစ်တဲ့ခလုတ်, ကောက်ခဲ့ဓိပ်ပာသောရောက်ကြပါ၏ရွေးချယ်ပါ။ အဆိုပါဂိမ်းမျှအသိဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ အဘယ်သူမျှမမှန်ကန်သောတုံ့ပြန်မှုရှိခဲ့သည်: သူတို့လုပ်နိုင်အားလုံးကွန်ပျူတာမှားဆိုပါတယ်နှင့်စက်ဝိုင်းကိုထပ်သည်ထင်ရှားထို့နောက်ကျပန်းတစ်ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်သူတို့ကအခြား button ကိုကောက်ယူနှင့်ကွန်ပျူတာရောက်ကြပါ၏, အမှန်အကန်။ သင် 50 Cent ထိုက်ထိုက်တန်တန်ရသွားပါပြီ။
အဆိုပါစေတနာ့ဝန်ထမ်းစက်ဝိုင်းမှတုန့်ပြန်နှိပ်ဖို့ရာ button ကိုသိတယ်ပြီးတာနဲ့သူတို့ထပ်ခါထပ်ခါလုပ်ငန်းစဉ်ထပ်ခါတလဲလဲ။ စက်ဝိုင်း။ မှန်ကန်သောခလုတ်ကို။ ဆုလာဘ်။ စက်ဝိုင်း။ မှန်ကန်သောခလုတ်ကို။ ဆုလာဘ်။ က Schlund များအတွက်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ဘယ်မှာသူသည်သင်တို့အစိတ်အပိုင်းများကိုတက်ပွင့်လင်းသည့်ဆုလာဘ်, အပေါ်အခြေခံပြီးအသစ်တစ်ခုအပြုအမူကိုသင်ယူတဲ့အခါမှာဦးနှောက်ထဲမှာဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတာကိုသိရန်လိုသည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကဘယ်လောက်ကြီးမားတဲ့ activation ကြောင်း, ဖြစ်ပြီး, အပြုအမူဖြစ်လာအဖြစ်ဘယ်လိုအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှပြောင်းလဲ လေ့။
သူတို့ခန့်မှန်းခဲ့ကြသည်သည့်အခါပထမဦးဆုံးကလစ်တွင်သည်, စေတနာ့ဝန်ထမ်း '' ဦးနှောက် Self-ထိန်းချုပ်မှု, ဆုံးဖြတ်ချက်ချနှင့်အပြုအမူပြောင်းလဲမှုနှင့်အတူဆက်စပ်တိုကျရိုကျပေါ်၌ရှိသောအမြှေး-တစ်ဦးဧရိယာ၌အနည်းငယ်တက် lit ။ သူတို့မှန်မှန်ကန်ကန်ဖြေဆိုဘို့အကျိုးကိုရတယ်အခါဒုတိယကလစ်နှိပ်ပြီးနောက်, ရုတ်တရက်သူတို့ရဲ့ဦးနှောက်အမြင့်ဆုံးဂီယာသို့ကန်နှင့်တစ်ဦးချင်းစီအထပ်ထပ်နှင့်အတူ၎င်းတို့၏တိုကျရိုကျပေါ်၌ရှိသောအမြှေးပိုပိုပြီးတက် lit, သူတို့ကသစ်ကိုအပြုအမူသင်ယူအဖြစ်၎င်းတို့၏ဦးနှောက်လှုပ်ရှားမှုတိုးမြှင့်ဖို့ဆက်လက်အဓိပ်ပာယျအရာ ။ ဦးနှောက်ကိုသစ်ကိုတာဝန်ကတရားဝင်တစ်အလေ့အထဖြစ်လာသည်ဆိုလိုတာကနိမ့်ဆုံးကြိုးစားအားထုတ်မှု, အားထုတ်သည်အထိသို့သော်-နှင့်ဤသတငျးကောငျး-အတွင်းအကြောင်းကို 50 အထပ်ထပ်ဖြစ်ပါသည်, Schlund ပြောပါတယ်, ပြောင်းပြန်ဖြစ်ပျက်-The တိုကျရိုကျပေါ်၌ရှိသောအမြှေးစတင်ပါလိမ့်မည်နည်းနေနှင့်ဒီထက်တက်ထွန်း။
Schlund ငါ့ကိုဒီအကိုပြောပြလိုက်တဲ့အခါသူကကျွန်မသာ 50 ကြိမ်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့ကိုယ့်ကိုကိုယ်တွန်းအားပေးရန်, ပြီးတော့သူကတစ်ဦးအလေ့အထဖြစ်လိမ့်မည်ရှိဆိုလိုတယ်လျှင်မူကား, ငါမေးပါ။ "ငါဟုတ်ကဲ့ပြောပါနိုင်ဆန္ဒရှိ" ဟုသူကပြန်ဖြေတယ်။ "ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကယ့်ကိုအဘယ်သူမျှမစိတ်ကူးရှိသည်။ အဘယ်အရာကိုငါသည်သင်တို့ပြောပြနိုင်, များစွာသော variable တွေကိုရှိပါသည်၏။ "အကြီးမားဆုံးတဦးတည်း
စိတ်ဖိစီးမှုသည်။ ဒါဟာပြောင်းလဲပစ်ရန်ကြွလာသောအခါစိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်အတွက်ခန္ဓာကိုယ်ကဖြန့်ချိသည့်ဟော်မုန်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အဆိုးဆုံးရန်သူဖြစ်ကြောင်းထွက်လှည့်: သူတို့ကအမှန်တကယ်ဦးနှောက်သတိဆုံးဖြတ်ချက်များမလိုအပ်ပါဘူးကြောင့်အပြုအမူတွေကိုပြန်ပြောင်းစေသည်ဖြစ်သောတိုကျရိုကျပေါ်၌ရှိသောအမြှေး, တားစီး (ကျွန်ုပ်တို့၏အကျွမ်းတဝင်အစားအစာများစားသုံးခြင်း , အရက်သောက်, ဆေးလိပ်သောက်) ။ မသာစိတ်ဖိစီးမှုဟော်မုန်းပြောင်းလဲပစ်ရန်တက်ကြွစွာရောက်ထားရန်လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးနှောက်၏ဒေသများအယှက်မရှိဘူး, သူတို့ကလည်းစိတ်ဖိစီးမှုလျော့နည်းကျဆင်းဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြအချက်ပြမှုများထွက်ပေးပို့ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ခံစားမှုစင်တာများ, လှုံ့ဆော်ခြင်း။ အဘယ်စိတ်ဖိစီးမှုလျော့နည်းစေ? အစားအသောက် (ကသဘာဝအ opiates ဖြန့်ချိသောကွောငျ့), အရက်, ဆေးလိပ်, စျေးဝယ်။
ဒါအောင်မြင်သောပြောင်းလဲမှုစိတ်ဖိစီးမှုစီမံခန့်ခွဲမှုအပေါ်တစ်စိတ်တစ်ဒေသအတွက်မူတည်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Schlund ကြောင့်လည်းလက်ျာဆုလာဘ်ရှာဖွေတာပေါ်တွင်မူတည်သည်, ကပြောပါတယ်။ "လူတွေကလေ့ကျင့်ခန်းမှပေးဆောင်တယ်ဆိုလျှင်," ဟုသူကပြောပြသည်, "လူတိုင်းကလုပ်ပေးလိမ့်မယ်။ နှင့်ဤတိုင်းပြည်ချွတ်အများကြီးပိုကောင်းပါလိမ့်မယ်။ "လို့သူကလေ့ကျင့်ခန်းမှငါ့ကိုမပေးဆောင်ပါလိမ့်မယ်ဆိုပါကကျွန်မမေးကြည့်ပါ။ သူက "သင်ကိုယ်တိုင်သင့်ခွေးကိုကုသရန်ချင်ပါတယ်လမ်းကိုဆက်ဆံဖို့ရှိသည်, သင်သည်သင်၏ဦးနှောက်စည်းရုံးသိမ်းသွင်းလိုလျှင်သင်သည်လေ့ကျင့်ခန်းသင့်ပါတယ်။ " ကျွန်တော်တို့ကိုအကြား Formica စားပွဲပေါ်သည်မိမိလက်ကိုခြံမျက်စိ၌ငါ့ကိုကြည့်များနှင့်ကပြောပါတယ်, ဒါကြောင့်ခဲသောအရာကိုင် ငါသူ့ကိုပြောပါမျှော်လင့်ရပါတယ်, ဒါပေမယ့်ဒီပွိုင့်မှာဘာမှမှပွင့်လင်းတယ်။
"ဟုသူမကနေ့တိုင်းကြမ်းပြင်ပေါ်မှာစိုစွတ်စေသောရဲ့စဉျးစားကွညျ့ပါ" ဟုသူကဆိုသည်။ "သင် '' သင်ကတစ်ပါတ်မှုအတွက်ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာစိုစွတ်သောမကျင့်လျှင်ဟေ့ခွေး, ငါသည်သင်တစ်ဦး rawhide အရိုးကိုဝယ်လိမ့်မယ်? 'ဟုပြောမယ့်နေ ဒါကတကားဟုသင့်ရဲ့သူဌေးနဲ့တူပါလိမ့်မယ် '' သင်ကငါးနှစ်အလုပ်လုပ်လျှင်, သင်သည်သင်၏စစ်ဆေးမှုများအရပါလိမ့်မယ်။ '' ဒါဟာသိပ်ဝေးပါပဲ။ "
တစ်ပတ်စောင့်ဆိုင်းဖို့ရှည်လျားလွန်းခဲ့ပါတယ်: ငါ့ MP3 ကစားသမားပျက်ကွက်အဘယ်ကြောင့်သိသာထင်ရှားတဲ့, ဒီဖြစ်ပါသည်။ ငါအပြုသဘောနိုင်ငွေပမာဏနှင့်အတူလေ့ကျင့်ခန်းပေါင်းသင်းသွားမယ်လျှင်, ဆုလာဘ်ချက်ချင်းဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်တဘက်, Schlund ငါ့ကိုပြောထားသည်, ငါပြီးသား (မျှနာကျင်မှု, အခြားအရာများအတွက်ပိုပြီးအချိန်) လေ့ကျင့်ခန်းမပေးနဲ့ဆက်စပ်ဖူးတဲ့ဆုလာဘ်နားမလည်ဖို့ရှိသည်။ ဤသို့ပြုအမှန်တကယ်ငါ့အအာရုံကြော circuitry ပြောင်းလဲနေတဲ့လိုအပ်သည်။ ကာအရွယ်ရောက်ပြီးသူကဦးနှောက် rewiring ငါရှာဖွေတွေ့ရှိရန်အကြောင်းကိုဖြစ်ကြောင်းကို, အလွန်လှည်ဖြစ်ပါတယ်။
che နှင့် SHE: ရက်အနည်းငယ် Schlund နဲ့ငါ့အစည်းအဝေးပြီးနောက်, ငါနှစ်ခုနှိပ်ခလုတ်နဲ့ကွန်ပျူတာ screen ကိုစိုက်ကြည့်, ယေးလ်မှာစိတ်ရောဂါရပ်ကွက်အတွက်သေးငယ်တဲ့စားပွဲခုံမှာထိုင်လျက်ပေါ့။ အဆိုပါကွန်ပျူတာ "Che" ပြောပါတယ် (သို့မဟုတ်ထိုသို့ "ဟုသူမက"?), ငါသည်သင့်လျော်သော button ကိုနှိပ်လို့ယူဆတယ်ပေါ့။ ငါ che ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ အဆိုပါကွန်ပျူတာကအသံမြည်မယ်, ထပ်ကြိုးစားမှငါ့ကိုပြောပြတယ်။ "Che" သို့မဟုတ် "သူမ"? ငါသူကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ Buzz ။ ထပ်ခါထပ်ခါငါ buzz ရ။ ငါသည်ဤဟာသဖြစ်ရမည်ထိုအခါမူကား, ငါ squint, ခက်နားထောင်ရန်နှင့်နောက်ဆုံးတော့ကြားစဉ်းစားတယ်။ ငါ che နှိပ်ပါ။ အဆိုပါကွန်ပျူတာ ding, ထို့နောက်နှစ်ခုပန်းရောင်နမ်းငါးမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ပေါ်လာကာရသေ့ကဏန်းနဲ့ခြောက်ချားကခုန်လုပ်ပါ။ ဒါကရှင်းလင်းစွာမယ့်ငါ့အ dopamine ရရှိသွားတဲ့သောငါ၏ဆုလာဘ်, ဖွင့်: ငါသည်ငါ့လာမယ့်ရယ်မိုက်ဆုလာဘ်ဖြစ်လတံ့သောအရာကိုမြင်နိုင်ပါသည်ဒီတော့ညာဘက်အဖြေကောက်နေအပေါ်လုံးဝချိတ်, လုပ်ပြီးကမြင်းနေကြတယ်ကစားခြင်းကိုစတင်ပါ။ ခဏတစ်ပြီးနောက်, ငါ့အာရုံကိုလှည့်လည်စတင်သည် ... ။ Buzz ။ ဒါကြောင့်ငါ squint ခက်ခဲနားထောင်ရန်, တဖန်ကြား: တစ်ဂီတမှတ်ချက်ခေါင်းပေါ်မှာသူ့ကိုတာမျိုးသည်အထိ "။ Che" တစ်ဦးက spaghetti-ပါးလွှာလူကိုရုတ်တရက်တစ် xylophone ကစားကွန်ပျူတာ screen ပေါ်မှာပုံပေါ်ပါတယ်။ ထိုအခါဘရုစ် Wexler, MD အခန်း၌သွားလာ။
Wexler တစ်ဦးဦးဆောင်အာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်များနှင့်ဦးနှောက်နှင့်ယဉ်ကျေးမှုရေးသားသူ, ဦးနှောက် plasticity နှင့်မည်သို့ပြောင်းလဲမှကျွန်တော်တို့ရဲ့စွမ်းရည်ကိုအကျိုးသက်ရောက်လေ့လာတယျ။ ငါသူ schizophrenia နှင့်အတူလူနာသူတို့ရဲ့အသံအပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်မှတ်ဉာဏ်တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ကူညီပေးဖို့ကိုအသုံးပြုသည်သောဤအစီအစဉ်ကိုထုတ်ကြိုးစားရန်လာပါတယ်။ "သင်ကြောင်းမှာအလွန်ကောင်းနေ" Wexler ငါ့ကိုပြောပြတယ်။ တကယ်ငါကထွက်ရှာဖွေမတိုင်မီလုပ်မည်မျှအမှားများထွက်ညွှန်ပြ, မပြော။ သို့သော်အမှန်တကယ်, သောအစီအစဉ်၏တပြင်လုံးကိုစိတ်ကူးင်: အောင်မြင်သောပြောင်းလဲမှုသညျ့ပြင်းထန်သော, မပြတ်မတောက်အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်အထပ်ထပ်လိုအပ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်? ကျနော်တို့ဆင့်ကဲဆန့်ကျင်အလုပ်လုပ်နေသောကြောင့်: ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးနှောက်တစ်ခါတစ်ရံ, အပြုအမူပြောင်းလဲအသက်ရှူအဖြစ်နည်းတူအရေးကြီးပါသည်သော်လည်းအသက်ရှူနှင့်ညှိနှိုင်းရွေ့လျားမှုလိုပဲတကယ်အရေးကြီးသောအရာများအတွက်စွမ်းအင်ထိန်းသိမ်းရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲနေကြပါတယ်။ အခွင့်အလမ်းပေးသောအခါ, အလေ့အထပြောင်းလဲမှုထက်လျော့နည်းစွမ်းအင်လိုအပ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးနှောက်အလေ့အထများမှပြန်ပြောင်း။ ဒါကရီစရာ "che" နဲ့လေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်ကဖြစ်ပျက်မသွားပါစေပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ "ဟုသူမက" အမှန်တကယ်လူကြီးများကိုနားထောငျလမျးကိုပွောငျးလဲ။ ဒါဟာသင်ထပ်ခါထပ်ခါလေ့ကျင့်ခန်းပြန်လုပ်ချင်အောင်ချက်ချင်းဆုလာဘ်အတွက်ရရှိလာတဲ့ပြင်းထန်သောအာရုံစူးစိုက်မှုတွန်းအားပေးသည်။
ကျွန်မပထမဦးဆုံးသူ့ရုံးခန်းသို့လမ်းလျှောက်သည့်အခါ "သင်ကပြောင်းလဲပစ်ရန်ခဲယဉ်းမယ့်အဘယ်ကြောင့်သိလို?" Wexler မေးတယ်။ "သင့်ဦးနှောက်ထဲမှာတရာဘီလီယံအထိအာရုံခံရှိပါတယ်။ တစ်ခုချင်းစီကိုတဦးတည်းကိုအခြားသူများထောင်ပေါင်းများစွာ၏ချိတ်ဆက်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ သင်နှင့်သင်ယူမှု-အပြုအမူတွေအကြောင်းပြောနေတာနဲ့ဦးနှောက်ကိုတလျှောက်လုံးအနုစိတ်စနစ်များအတွက်ရာပေါင်းများစွာသောဆဲလ်ထောင်ပေါင်းများစွာ၏၏၏ဘက်ပေါင်းစုံလုပ်ရပ်များမှတ်ဉာဏ်-ကပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့အရာအားလုံး။ "လူကြီးများခုနှစ်တွင်သူတို့အားစနစ်များ hardwired ဖြစ်ကြသည်။
Young ကဦးနှောက်အဆက်မပြတ်သားတို့သည်မိမိတို့အတွေ့အကြုံများအပေါ်အခြေခံပြီးသတင်းအချက်အလက်စီမံဆောင်ရွက်လမ်းကိုပြောင်းလဲနေတဲ့အာရုံခံအကြားအသစ်သောဆက်သွယ်မှုများကိုဖွဲ့စည်းကြသည်: သင်ဆိင့်သောအခါ, ကွဲပြားခြားနားသောဇာတ်လမ်းပါပဲ။ ဒါက plasticity င်နှင့်လေးတွေဘာသာစကားတက်စိမ်, အရှက်ကွဲဖို့အရွယ်ရောက်သူထားကြောင်းနှုန်းထားများမှာအသစ်သောယဉ်ကျေးမှုများလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်အဘယ်ကြောင့်ပါပဲ။ "ငါတို့သည်ငါတို့၏ 20s hit အခြိနျအားဖြင့်" Wexler ကပြောပါတယ်, "ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးနှောက်။ သူတို့ရဲ့ plasticity အများစုဆုံးရှုံး" ဒါပေမယ့်ကံကောင်းထောက်မစွာ, သူတို့ကအားလုံးဆုံးရှုံးခဲ့ရကြပြီမဟုတ်။
သင်တဦးတည်းအားကြီးသောမျက်စိနှင့်တဦးတည်းအားနည်းမျက်စိရရှိပါသည်မြင်ယောင်ကြည့်ပါ, သူကငါ့ကိုပြောပြတယ်။ သင်တစ်ဦး patch ကိုအတူကောငျးမှမျက်စိဖုံးလွှမ်းဒါကြောင့်အဘယ်သူမျှမနှိုးဆွရရှိသွားတဲ့လျှင်, အားနည်းမျက်စိအားကောင်းလာပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်ဒုတိယသင်သည်နောက်တဖန်အတွက် patch ကို, ခိုင်ခံ့သောမျက်စိကန်ဘောကိုဖယ်ရှားခြင်းနှင့်အားနည်းတဦးတည်းအားနည်းရရှိသွားတဲ့။ အလားတူဦးနှောက်ထဲမှာအားလုံးလမ်းကြောင်း၏မှန်သည်။ ထူထောင်ပြီးတာနဲ့သူတို့တစ်ဝှမ်းကပ်နှင့်နေသမျှကာလပတ်လုံးသူတို့အသုံးပြုသောခံရပါတယ်ကဲ့သို့ခိုင်မာသောရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည်။ ဒါကြောင့်ပြောင်းလဲမှုဆီသို့ပထမဦးဆုံးခြေလှမ်း, Wexler ကပြောပါတယ်နေရာများသို့သွားပါက (အိမျတျော၌ချောကလက်ရှိခြင်းမြှင့်လုပ်ဆောင်ကြောင်းဘာမှဖျက်သိမ်းရေး, ဆိုလိုတာကသင် (ဆိုကဲ့သို့တစ်ချောကလက်စွဲ) ကိုဆုံးရှုံးချင်သောလမ်းကြောင်းအပေါ်တစ်ဦး "patch ကို" ချပြီးဖြစ်ပါတယ် သငျသညျအများအားဖြင့်) ချောကလက်ကိုဝယ်ကြလော့။ အရက်သောက်သို့မဟုတ်ဆေးလိပ်ဖြတ်ရန်ကြိုးစားသူကိုများစွာသောလူအဘို့, ကစပျစ်ရည်ကိုသို့မဟုတ်စီးကရက့်တဦးတည်းဖန်ရှိသည်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးအဘယ်ကြောင့်ဤဖြစ်ပါတယ်။ ဘိန်းဖြူနှင့် Coke စွဲသူတို့၏မူးယစ်ဆေးရက်ချိတ်ဆက်သောနေရာများနှင့်လူများကိုရှောင်ကြဉ်ရပါမည်အဘယ်ကြောင့်ပါပဲ။
Dieter များအတွက်, ကိုယ့်သင့်ရဲ့ပုံမှန်ကုန်စုံစတိုးဆိုင်သို့လမ်းလျှောက်အဟောင်းအကျွမ်းတဝင်အစားအစာလမ်းကြောင်းကိုသက်ဝင်ခြင်းနှင့်အသကျရှငျကထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်။ ဒါအောင်မြင်သောကိုယ်အလေးချိန်ကသငျသညျအစာကိုစားသောအရာကိုအကြောင်းအဖြစ်လူနေမှုပုံစံစတဲ့ပြောင်းလဲမှုအကြောင်းကိုသလောက်ဖြစ်ပါသည်: အသစ်တစ်ခုကိုစတိုးဆိုင်မှာဆိုင်; အစားအစာအသစ်များကိုအမှတ်တံဆိပ်ကိုဝယ်ယူ; ပန်းကန်၏အသစ်တစ်ခုကို set ကိုအသုံးပြု; တစ်နေ့တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသောအချိန်တွင်အခြားအခန်းတစ်ခန်းထဲမှာကိုစားကြလော့။ ဤအရာအလုံးစုံကိုသင်အသစ်တစ်ခုကိုတဦးတည်းဖွံ့ဖြိုးနိုင်အောင်ဟောင်းကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်တဲ့လမ်းကြောင်းငတ်ကူညီပေးပါမည်။ "ဒီကပိုအကြီးအကျယ်သင်သည်သင်၏အလေ့အထများပွနျလညျဖှဲ့စညျး" Wexler ကပြောပါတယ်, "သင်ပြောင်းလဲပစ်ရန်ကြိုးစားနေသောပိုထူထောင်လမ်းကြောင်းအားနည်း၏။ "
ဒါပေမဲ့အဟောင်းလမ်းကြောင်းဖယ်ထုတ်အရာအားလုံးမဟုတ်ပါဘူး။ သငျသညျရှိပြီးသားကျန်းမာလမ်းကြောင်း-ပင်အဘို့အသင့်ဦးနှောက်ကိုရှာလျှင်သင်တစ်ဦးအလွန်သေးငယ်သောအားနည်းတထို့နောက်အမှုအရာအများကြီးပိုမိုလွယ်ကူစေပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ကိုခိုင်ခံ့စေ။ Wexler တစ်ဦး "ငါလေ့ကျင့်ခန်းကိုကြိုက်" လမ်းကြောင်းရှာတွေ့မှငါ့ကိုပြောပြတယ်။ ငါတဦးတည်းရှိစဉ်းစားကြဘူးသူ့ကိုပြောပြပါ။ သူကမဝယ်ဘူး။ "အဲဒီမှာသင်တစ်ဦးသည်ဆိတ်သငယ်အဖြစ်ကိုခစျြအချို့သောလှုပ်ရှားမှုသို့ရောက်သည်မဟုတ်လော" ဟုသူကမေးတယ်။ ငါဒါမစဉ်းစားကြဘူး။
ငါသည်ငါ၏အသစ် MP3 ကစားသမားကိုနားထောင်ပြတင်းပေါက်ထွက်ကြည့်အဖြစ်ရထားစီးနေအိမ်တွင်, သို့သော်, ဒါဝိဒ်သည် Bowie ရဲ့ "အပြောင်းအလဲများ on" လာနဲ့ကျွန်မရယ်မောကိုစတင်ပါ။ ဟုတ်ပါတယ်, သင့်လျော်တဲ့။ ဒါပေမယ့်လည်းငါ၏အနောက်တံခါးကိုအိမ်နီးချင်းသီချင်းကြီးနဲ့ကျွန်မမိန်းကလေးတစ်ဦးအခါငါသည်ငါ့အိမ်နောက်ဖေး၌ရှိသူဖြစ်ပါတယ်။ ကြှနျတေျာ့တစျခုလုံးကိုနုပျိုအသက်အဘို့ငါ roller-စကိတ်စီးခြင်းနှင့်အတူစွဲလမ်းခဲ့သည်။ ကျွန်မရဲ့ပထမဦးဆုံးနမ်းစကိတ်ပေါ်တွင်ရှိ၏ ငါ roller-ရှိသူနေ့တိုင်းအထက်တန်းကျောင်းမှ, ထို့နောက်အတန်းလူတန်းစားကနေခန်းမဆင်းလှိမ့်။ တကယ်တော့ငါ့အ PE လိုအပ်ချက်လည်နှင့်ငါ့အဆက်မပြတ်စကိတ်စီးခြင်းအဘို့အကြှနျုပျကိုခရက်ဒစ်ပေးဖို့ငါ့အအထက်တန်းကျောင်းယုံကြည်စိတ်ချသွားတယ်။ ဤအမှုအလုံးစုံကိုအောကျမေ့ရထားပေါ်မှာထိုင်, ငါပဲ, ငါ၏ dopamine ထီပေါက် hit, ပြုံးနှင့်ထင်ပါတယ်။
ကျွန်မအိမ်ပြန်ရတဲ့အခါ, ငါသည်ငါ့တဆယ်နှစ်အရွယ် Rollerblades အပေါ်သိုင်းကြိုးကတစ်ဦးပါပေးပါ။ ငါအချို့ဒစ္စကိုဖွင့်ခြင်းနှင့်လှိမ့်ကိုစတင်ပါ။ နေပူနေပါတယ်; ကြှနျတေျာ့ခွေးကိုနောက်ငါ့ထံသို့အပြေးနေသည်။ ငါလက်တွေ့ကျကျငါ၏အသွေးပြန်ကြောမှတဆင့် coursing အဆိုပါ dopamine ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ ငါ၏အလေ့ကျင့်ခန်းပြဿနာဖြေရှင်းနေသည်။ ဘဝကပိုကောင်းမဖြစ်နိုင်ဘူး။
ငါနိုးထလာမယ့်နေ့ကို, ငါ့ကွန်ပျူတာစဉ်းစားတွေးခေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့, ငါ၏ဧည့်ခန်းသို့လမ်းလျှောက်, အိုးအကြှနျုပျ၏ဘုရားသခငျ, ငါသည်လုပ်ဖို့သိပ်ရှိသည်။ နာရီအနည်းငယ်အကြာတွင်ကျွန်မယခု Rollerblade သွားသင့်, ထင်ပါတယ်။ သို့သော်လည်းငါသည်အလုပ်များတယ်။ ငါမနေ့ကကျင့်သုံး, ထိုသို့မိုးရွာတော့မယ်နဲ့တူမှတပါး, ကကြည့်နေတဲ့နောက်ဆုံးနေ့, ရရှိပါသည်။ ငါနောက်ပိုင်းမှာလုပ်ပါလိမ့်မယ်။ နောက်ပိုင်းမှာကြွလာသောအခါ, ငါတနေ့လုံးအလုပ်လုပ်ရာမှငြီးငွေ့တယ်, အခုကမှောင်မိုက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအခါငါတစ်မိနစ်လောက်စောင့်ပါ, စဉ်းစားပါ။ အဘယ်ကြောင့်မနေ့ကထံမှသမျှသော dopamine နောက်တဖန်တက်နှင့် Rollerblade ရဖို့ငါ့ကိုမောင်းမဟုတျလော ငါ၏အဦးနှောက်မေ့လျော့ခဲ့သလား
တစ်ပတ်အကြာမှာကျွန်မလေ့ကျင့်ခန်း၏ဇီဝြဖစ်စဉ်သို့ကျယ်ပြန့်သုတေသနပြုမိခဲ့သူကျောက်သားမှာကော်လိုရာဒိုတက္ကသိုလ်မှတစ် neuroimmunophysiologist, ကမျောနီကာ Fleshner, Ph.D ကိုခေါ်ပါ။ ငါသည်ငါ့ခွအေနကေိုရှင်းပြပါ။ ငါကြိုက်တယ်လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုကိုတွေ့သည်ကား, ငါဖြေရှင်းသည့် dopamine အရာရရှိပါသည်ထင်ပေမယ့်ရယ်စရာအရာဟူမူကား, ငါပဲလုပ်နေတာမဟုတ်ပါဘူး။
Fleshner အလွန်ရှင်းပါတယ်: ဒါဟာသင်သည်သင်၏ dopamine ထီပေါက်နှင့်သင့်ဦးနှောက်ကိုရှာဖွေမကြိုက်ဘူးရဲ့ချက်ချင်းယခုငါတို့နေ့တိုင်းလေ့ကျင့်ခန်း, ကပြောပါတယ်။ ခဏတစ်များအတွက်သင်ဆဲထိုသို့ပြုမှသင့်ကိုယ်သင်တွန်းအားပေးရန်ရှိသည်။ ဒါပေမယ့်ငါမတစ်ဦးအလွန်ကောင်းသောအကြောင်းပြချက်ရှိသည်, သူမ၏ပြောပြ: ငါသူမ၏သုတေသနတိရိစ္ဆာန်များအတွက်လေ့ကျင့်ခန်းဆန္ဒအလျောက်စစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းမပြုလုပ်အတူတူဖြစ်စဉ်အကျိုးကျေးဇူးများကိုဦးတည်သွားစေပါဘူးအတင်းအဓမ္မတွေ့ရှိခဲ့ကိုငါသိ၏။ တကယ်တော့ဒါဟာအမှန်တကယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာစိတ်ဖိစီးမှုဟော်မုန်းတစ်ခုတိုးလာစေခြင်းအားဖြင့်တိရိစ္ဆာန်များကို '' ကိုယ်ခံအားစနစ်အားနည်းနေခြင်း။ ငါသည်ဤအကြောင်းကိုသူမ၏မေးပါ, သူကစစ်မှန်တဲ့င်ပြောပါတယ်, ဒါပေမယ့်ငါစိုးရိမ်ရန်မလိုပါ။ အဘယ်ကြောင့်? ငါသည်ကိုယ်အလိုအလျောက်ပြဿနာများဖြစ်ပေါ်စေဖို့လုံလောက်တဲ့တာရှည်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရန်ရှိသည်မည်မဟုတ်လို့ပဲ။ အရာမှငါ "ငါ့ကို Excuse?" လို့ပြော
ထို့နောက်သူမသည်ငါ့ကိုအံ့သြဖွယ်အရာတစ်ခုခုကိုပြောပြ: ငါပြုသမျှအားလုံးသည်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသုံးခန့်နှစ်ပတ်အတွင်းအဘို့မှန်မှန်လေ့ကျင့်ခန်းမှကိုယ့်ကိုယ်ကိုအတင်း, ငါ့ဦးနှောက်ကိုသူမအဘို့အံ့ဖွယ်-Gro ခေါ်ဆိုရသောဦးနှောက်ဆင်းသက်လာ neurotrophic အချက် (BDNF), ဟုခေါ်သောပရိုတိန်းကိုထုတ်လုပ်စတင်မည် ဦးနှောက်။ ဒါဟာဦးနှောက် plasticity တိုးပွါး, ဒါသင်, သင်ယူရှင်းလင်းစွာစဉ်းစားခြင်းနှင့်အချိန်ကြာကြာကာလအဘို့အာရုံစူးစိုက်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာအစကိုပိုမိုငါရပိုဆုလာဘ်လေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်တဖန်ငါ့ dopamine system ကိုငါမကြာမီတပ်မက်ပါလိမ့်မယ်တစ်ဦးအလေ့အထကျင့်သုံးစေရန် activated ဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုတာက dopamine neurotransmission, တိုးပွားစေပါသည်။
"ကိုယ့် Rollerblades ပေါ်တွင်တင်," Fleshner ငါ့ကိုပြောပြတယ်။ "တချို့နားကြပ်ပေါ်သိုင်းကြိုး, leash တက်သင့်ရဲ့ခွေး, အပြင်ဘက်သို့ သွား. , အခုလေ့ကျင့်ခန်းကိုစတင်ပါ။ "
ငါဘာငရဲ, အိုးစဉ်းစားမီတစက္ကန့်ဘို့ဖုန်းကိုကိုင်ပြီးထိုင်။ သုံးပတ်ကြောင်းမကောင်းတဲ့မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါနဲ့တစ်နေ့တဦးတည်းအဘို့အထွက်ဦး။ ငါတစ်နေ့နှစ်ယောက်နောက်ဆုံးအချိန်ထွက်မသွားခဲ့ဘူးသောကြောင့်ဟုတ်တယ်, ငါခြစ်ရာကနေစတင်တာပါဆိုလိုတာက, နောက်တဖန်နေ့ကတဦးတည်းပါပဲ။
ငါကကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်တဲ့အပြုအမူတွေကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်ဒါခက်ခဲမယ့်အဘယ်ကြောင့်ဤ quest ထွက်ရှာတွေ့မှစတင်ခဲ့သည့်အခါကျွန်မထက်ပိုတစ်ဒါဇင်သိပ္ပံပညာရှင်များနှင့်ပြောဆိုသော။ တစ်ခုချင်းစီကိုတဦးတည်းကဒီအချို့ဗားရှင်းရယ်နှင့် said: "ငါသည်ထိုမေးခွန်းကိုဖြေဆိုနိုင်လျှင်, ငါတစ်နိုဘယ်ဆုအနိုင်ရနှင့်တန်းစီမူးယစ်ဆေးကုမ္ပဏီများမှရှိချင်ပါတယ်
ဒါပေမယ့်အမှန်တရားကသိပ္ပံပညာရှင်အချို့အလွန်အရေးကြီးသောအရာများကိုအဝတ်မခြုံဘဲရှိသည်ဟုဖြစ်ပါတယ်။ အတူစတင်ပြောင်းလဲမှု Monument ခက်ခဲသည်။ တချို့လူတွေကကိုယ့်ကိုပြောင်းလဲဖို့ဆုံးဖြတ်, တဦးတည်းနံနက်နိုးထနှင့်အတူကပ်နိုင်ပါတယ်။ သို့သော်ဖြစ်ကောင်းအများဆုံး, များစွာသောမဟုတ်ဘဲနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါအကြောင်းပြချက်မျိုးဗီဇဖြစ်နိုင်သည်; သင်ကြီးပြင်းနေတဲ့လမ်းဖြစ်မည်အကြောင်း, ဖြစ်ကောင်းတချို့လူတွေအခြားသူများထက်ပိုမိုအားကောင်းတိုကျရိုကျပေါ်၌ရှိသောအမြှေးရှိသည်။ သိပ္ပံပညာရှင်များနေဆဲသေချာမရှိကြပေ။ အဘယ်အရာကိုသူတို့သိကြပါသငျသညျရုန်းကန်သောသူတို့အားလူမျိုး၏တဦးတည်းအနေလျှင်, ထို Over-ကြောင့်သင့်ဦးနှောက်အလုပ်ဖြစ်တယ်ရုံလမ်းရဲ့ကိုယ့်ကိုကိုယ်တက်ရိုက်ပုတ်ဘာမျှမယ့်ဖြစ်ပါသည်။ ဒါပေမယ့်လည်းသုတ်ပဝါအတွက်ဆမ်းနှင့်ပြောကာဆင်ခြေမပေးမယ့်, ကောင်းပြီ, ငါအလုံအလောက် dopamine ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး, ဒါမှမဟုတ်ကျွန်မရဲ့မကောင်းတဲ့လမ်းကြောင်းများလွန်းအားကြီးသောဖြစ်ကြသည်။ ဘရုစ် Wexler ငါ့ကိုပြောပြတယ် "ဟု The ပိုပြီးကျွန်ုပ်တို့ဆန့်ကျင်တက်နေသောအရာကိုနားလည်သည်ထက်ပိုသောငါတို့ကိုအောင်မြင်စွာပြောင်းလဲနိုင်ရန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးနှောက်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ကူညီနိုင်လိမ့်မည်ဟုမဟာဗျူဟာများဖွံ့ဖြိုးနိုင်တယ်။ "
ဒါကြောင့်အစားနှစ်သစ်ကူးနံနက်နှိုးထနှင့် resolution ကိုအလုပ်မလုပ်ဘူးသည့်အခါပြီးတော့တစ်လအကြာမှာကိုယ့်ကိုကိုယ် berating "ငါသည်ယခု X ကိုလုပ်ဖို့သွားမယ်" ဟု၏, သတိရ: သင်ကသင့်ဦးနှောက် rewiring ထက်လျော့နည်းဘာမျှလုပ်နေပါတယ်။ ချဉ်းကပ်မှုပြောင်းလဲမှုသစ်ကိုသင်တို့အားဘာသာစကားသို့မဟုတ်အသစ်တခုတူရိယာသင်ယူနေလျှင်အဖြစ်။ သိသာထင်ရှားတဲ့, သင်ကျွမ်းကျင်စွာဖြစ်သို့မဟုတ်ချက်ချင်းဆင်ဖိုနီတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး; သငျသညျစဉ်ဆက်မပြတ်အာရုံနှင့်အလေ့အကျင့်လိုပါလိမ့်မယ်။ တစ်ခုကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်တဲ့အလေ့အထကျော်လွှားခြင်းအပြောင်းအလဲ (သို့မဟုတ်အရာအားလုံးထက်) အကြောင်းကိုအလေးပေးပိုမြန်သငျသညျနားလည်သဘောပေါက်ထက်လှည်းကိုချွတ်သင်သည်ခေါက်ပါလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့, သက်ဆိုင်တဲ့အပြုအမူပြောင်းလဲခြင်းနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုစီမံခန့်ခွဲပါဝငျသညျ။ အားလုံးအထက်, ထို dopamine system ကိုသွားရ: သူတို့ကိုချက်ချင်းဆုလာဘ်-အောင်ရှာပါနှင့်မနာလိုသောဖြစ်ပါဘူး။ သင့်ဦးနှောက်ကသူတို့ကိုလိုအပ်ပါသည်။ ထိုအခါငါကပိုမိုလွယ်ကူရရှိသွားတဲ့ (ကောင်းစွာ, Volkow, Schlund, Wexler နှင့် Fleshner ဂတိတော်နှင့်စပ်ဆိုင်သော) ကတိပေး။ အဲဒီ Self-အကူအညီနဲ့တစည်းမယ့်